Erosion nke cervix - mgbaàmà, ihe na-akpata, ọgwụgwọ, ịmalite ikuku mmiri
Mgbapu nke oke - ihe ise kachasị na-apụta na ụzọ 3 kachasị mma maka iwepụ
Nsogbu ikuku bụ ọrịa gynecology nke ọnụọgụ dị iche iche na omimi dị n'elu akụkụ ahụ. Ihe omumu bu ebe zuru oke ma achoputa na ogugu iri ato n'ime umuaka nke umuaka. Ọtụtụ mgbe ọrịa ahụ na-eme mgbe a mụsịrị nwa.
Erosion nke cervix - ihe kpatara ọdịdị
N'ileba anya na oria di otua dika ogba aghara, ihe kpatara oganihu, ndi dibia choro otutu ihe. Endocervicitis na- arụ ọrụ pụrụ iche na mmepe nke ọrịa. Ọrịa a na-ewusi ọrụ nchịkọta nke glands dị n'ime anụ ahụ nke epithelium cervical. A na-ewere eziokwu a dị ka mmejọ. N'etiti ihe ndị ọzọ na-akpata ụdọ, ndị dọkịta na-akọwa:
Ọrịa na usoro mkpesa nke usoro ọmụmụ. Ihe ndi na-acho acho, nke bu ndi mmadu na-acho oria (gonococci, trichomonads , staphylococci), na ndu ha na-emetuta ihe ndi ahu na-eme ka aru di iche iche, na-eme ka ebute mmiri.
Ọrịa na mgbatị na-arụ ọrụ na akụkụ ahụ nwere ike ijikọta ya na mmebi nke oyi akwa mucous.
Imebi ihe omimi homonal nwekwara ike ime ka mmiri ghara ikpo. Na nwata ma ọ bụ na-etolite oge ntorobịa, ọdịda mgbanwo, enwere ikere dị ka ihe na-akpalite ọnyá ekpenta nke mucous.
Mbelata mkpesa mpaghara.
Nsogbu nke mmepụta intrauterine nke nwa ebu n'afọ n'oge ime ime. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-emepụta mpaghara nke epithelium cylindrical na mpụga pharynx cervical.
Erosion nke cervix mgbe nnyefe
Mgbu nke ụbụrụ n'oge ime ime nwere ike ime ka ọtụtụ nsogbu nke usoro gestation. Ma n'omume, ọrịa a na-eme mgbe a tụchara ime. Ihe na-akpata nrụpụ bụ nrụgide siri ike na akpanwa na olu mgbe a na-enyefe ya, nke ga-esi na ya pụta. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị na-enye aka na mmepe nke ọrịa n'oge a mụrụ nwa na mgbe amuchara nwa bụ:
mgbanwe dị na nzụlite hormonal ;
ọnụ ọgụgụ nke nchebe anụ ahụ;
nhazi ezighi ezi n'oge nnyefe.
Erosion nke cervix na nulliparous
Ihe na-akpatara ụbụrụ nke ụmụ nwanyị na-enweghị isi na-akpata n'ihi ahụike nke usoro ọmụmụ ha na àgwà nke mmekọahụ ha. Mgbe ị na-amụ ihe ndị na-akpalite ọrịa ahụ na ụmụ agbọghọ, ndị dọkịta ekwuola na mgbe mgbe usoro mmalite nke mmebi nke mucosa bụ mmalite mmalite nke mmekọahụ. Mgbe usoro okike adịghị njikere maka ịmụ nwa (ụmụ agbọghọ nwere obere ikpu), enwere nnukwu nsogbu nke trauma, nke na-ebute njupụta nke cervix. Tinyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ohere ịrịa ọrịa pụta:
agbata ikike nke obodo;
mgbanwe mgbe niile nke ndị mmekọ nwoke na nwanyị.
Kedu ihe ize ndụ nke nbibi nke cervix?
Ndị dọkịta kwenyere na ọnya ọ bụla na-egbuke egbuke nke ụbụrụ mucosa na-egbu egbu bụ ihe dị mma maka mmepe nke ọrịa ma ọ bụ mbufụt. N'ịbụ ndị na-enweghị ọgwụgwọ ruo ogologo oge, a na-ahụ ọrịa ndị ọzọ. N'agbanyeghi ụdị ụdị mmetọ a na-ede na ndị ọrịa, ndị inyom niile nwere ọrịa a nwere ihe ize ndụ nke ịmepụta ụdị ọrịa ndị ọzọ:
erythroplasty (ọbara ọbara ọbara ọbara ọbara na gburugburu mucosa);
cancer cancer - na nzube nke iwepụ ya, biopsy cervical n'oge mbupu mmiri bụ usoro iwu.
Ezigbo ogbugba nke cervix
Ezi mbupu na ọdịdị ya yiri nri. Mmebi na mucous akpụkpọ ahụ na-eduga na mbufụt nke eplaered na multilayered epithelium. N'oge usoro nchịkwa, nke na-ewe izu 1-2 site na mgbe ebili mmiri, a ga-ekpochapụ ihe dị na ya ma ọ bụ mgbanwe ya n'ime ectopic - mkpụrụ ndụ nke epithelium ahụ dị elu na-anọchi ya.
N'ọmụmụ ihe gbasara ahụike, ndị dọkịta na-eji nhazi ahụ, dịka a ga - esi kọwaa ezi mmiri nke cervix, na-adabere na ihe na - akpali akpali, na - ekewa n'ime ụdị ndị a:
mkpasu iwe - ihe kpatara ọrịa nke akụkụ ahụ;
traumatic - bụ ihe na-akpata mmerụ ahụ, ọrụ, mmekọrịta siri ike, na-etolite n'oge a na-amụ nwa, ime ime;
chemical - emepụtara site na mmebi nke mucosa site na mmetụta nke ihe na-emebi emebi mgbe ị na-agbanye aka;
Burns - a na - emepụta ebe a na - eme ka ọnya ahụ dị ọcha;
nsogbu - ihe si na mmebi nke ọbara nke cervix.
Mgbagha nke na-emepụta ihe nke mmiri
N'ọtụtụ ọnọdụ, mbido mmiri na-eto eto na-eto eto. N'ọnọdụ nke mmepe nwa ebu n'afọ, e nwere mmebi nke ezi mmepe nke eriri uterine. N'ihi ya, ókè nke dị n'etiti epithelium nke multilayered na cylindrical na-agbanwe n'akụkụ akụkụ nke akụkụ ahụ. Njehie a adịghị oke ma na-agakwa na afọ 23-25. Mgbapu dị otú ahụ nke cervix bụ njirimara nke ndị inyom na-eme ihe ike na ndị na-eji ọgwụ mgbochi afọ ekwu okwu ogologo oge.
Nbibi nke oke nke cervix
N'ihe si n'aka onye ọkà mmụta sayensị na-anụ nkwubi nke nbibi nke cervix, ihe ọ bụ maka ọrịa - ụmụ nwanyị anaghị ama mgbe niile. A na-ejikarị okwu a mee ihe iji mata ụdị ọgwụgwọ nke epitheliọl na-adị na mpaghara mpaghara ahụ, bụ nke epithelium multilayered a na-ahọrọ. Mgbe a na-enyocha ya, dọkịta ahụ nwere ike ikpebi ọnia ọnya nke agba ọbara uhie na obere ntakịrị. Ọtụtụ mgbe, ndị dọkịta na-eji okwu bụ "ectopia" kọwaa ụdị ebili mmiri a.
A na-enwete ma ọ bụ nke dị n'ime ụwa. N'okwu nke abụọ, a na-ewere ọrịa a n'ihi mmebi nke usoro mmepe intrauterine. Enweghi ike ikpochapu nwere ike ibute na:
ihe omumu nke usoro omumu.
Erosion nke cervix - mgbaàmà
Ihe mbụ nke pathology na-egosi na enweghi foto a na-akpọ foto. A na-ezochi mgbaàmà nke ọrịa ahụ. Naanị mmụba nke ọnya nke akpụkpọ anụ mucous nke ụmụ nwanyị na-amalite ịdekọ ihe ịrịba ama nke njirimara nke eriri mmiri:
Mgbu na-egbu mgbu n'ime afọ ala, ọ bụghị ejikọta na nsọ nsọ;
abawanye na olu nke ihapu;
malfunctions nke oge nsọ.
Mgbapu mmiri na-ekpofu mmiri n'oge ikpo mmiri nke cervix bụ ihe mgbaàmà kachasị mma nke ọrịa. Ha na-amụbawanye na olu ma nwee ike ịpụta n'èzí oge izu ike. Na mgbakwunye, njirimara e gosipụtara nke ebili mmiri na-agba ọbara site na ikpa mgbe enwe mmekọahụ. N'oge enwere mmekọahụ, enwere ọnyá ọzọ na mgbagha nke mmiri nke dị ugbu a, nke na-eme ka ọbara si n'ọbara pụta.
Erosion nke ọhụụ - ọgwụgwọ
Ọgwụgwọ nke ikpofu nke cervix gụnyere nchoputa mbụ nke nsogbu ahụ, dịka a na-ahọrọ onye ọ bụla n'ime usoro ọgwụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na mgbapụta kpatara ọrịa na usoro ọmụmụ, ndị dọkịta na-enye ọgwụ antibacterial, ọgwụgwọ antiviral, dịka ụdị ọrịa ahụ. Ná ngwụsị nke usoro ọgwụgwọ ahụ, a na-ekpochapu ihe mgbochi nke mucous membrane nke cervix ozugbo. Ọgwụgwọ dị otú a na-enye ohere iji kpochapụ ihe ọkụkụ ọbụna nye ndị inyom na-eme ihe ike. Na mbụ, a na-atụ aro ka a na-agwọ ọrịa ahụ mgbe a mụsịrị nwa.
Ọgwụgwọ ọgwụ ọgwụgwọ cervical
A na-eduzi ọgwụgwọ ọgwụ kpọmkwem na-akpata mgbanwe ntụgharị. Ọ na-enye aka ọ bụghị nanị iji kpochapụ ihe na-akpali akpali, kamakwa iji gbochie mgbasawanye nke ilekwasị anya, iji belata ihe ize ndụ nke ịba ụba ọnya ekpenta. Ihe kachasị dị irè bụ kandụl site na ikuku mmiri. Ụdị ọgwụ a na-emetụta ihe gbasara anụ ahụ metụtara, na-akpali akpali ma na-egbochi mgbatị nke ọrịa. Iji kandụl na-agwọ ọrịa nke ọkụkụ:
Mmebi na akpụkpọ anụ mucous kpatara site na mmebi nke enweghị aha microflora nke ikpu.
Mmetụta na-egbu mgbu mgbe ị na-enwe nsọ nsọ na mpaghara sacrum.
Ọgwụgwọ mgbe a na-ete ime, ịmụ nwa.
Ngwakọta mgbagwoju anya mgbe ịghasịsịsị nke mmiri.
Otu n'ime ihe ndị e ji eche echiche na-emetọ mmiri, a na-eji ọgwụ ọjọọ ndị a eme ihe:
Erosion nke ọhụụ - ọgwụgwọ na ọgwụgwọ ndị mmadụ
Ọgwụgwọ nke ebili mmiri na-eme n'ụlọ enweghị ike ime n'enweghị ọgwụgwọ ndi mmadu. Ndị dọkịta kwetara na ha na-eji ọgwụgwọ ọzọ. Tupu ị na-eji ọgwụ ọgwụ, kpọtụrụ dọkịta. N'etiti ndị dị irè, a ga-ahụ ntụziaka ndị na-esonụ.
Tincture nke calendula
mịrị amị okooko osisi nke calendula - 0,5 iko;
A na-awụnye ihe ndị dị na ite ma tinye ya na vodka.
Tinye ebe na-egbukepụ egbukepụ, ebe anwụ na-adigide ruo ụbọchị 14.
Iyo. 1 teaspoon nke infusion na-agbakwunyere otu iko mmiri ọkụ na douching kwa ụbọchị. Malite site n'ụbọchị nke abụọ mgbe ị gachara. Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 21.
Ihe dị iche iche site na mmiri
castor mmanụ - 2-3 tụlee;
aloe ihe ọṅụṅụ - 3 tsp.
mmanụ aṅụ - 1,5 tsp.
Ihe ndị e ji emepụta ahụ bụ nke ọma.
A na-eji mmiri ọgwụ na-eme ka mmiri na-esi na ya pụta ma gbanye n'ime ikpu n'abalị. Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 15.
Ngwọta maka sringing
okooko osisi nke marigolds - 1 tbsp. ùkwù;
mmiri - 200 ml.
A na-eji ihe mmiri na-esi na mmiri wụsara ihe.
Nagide ọnwụ 20 nkeji.
Nyocha ma jiri ngwọta natara nke syringing.
Nlekọta redio nke ikuku mmiri
Idozi ikuku mmiri site na ebili mmiri redio bụ usoro dị irè nke ịgwọ ọrịa ahụ. Usoro ahụ na-egbochi ịkpọtụrụ ndị ahụ mebiri emebi. Na-agafe site na ngwa pụrụ iche, a na-agbanwezi ugbu a na ebili mmiri redio, nke otu electrode na-eduzi na mpaghara a na-emetụta. N'elu ahụ n'onwe ya adịghị emetụ ọkụ, a naghị ewepụ ọkụ ọkụ. Iji belata mmetụta uche na-egbu mgbu, ndị dọkịta nwere ike iji nchịkwa mpaghara.
Ọgwụgwọ nke ikuku cervical site laser
N'ikwu banyere otu esi emeso oke mmiri, ndị dọkịta na-ekesa ọgwụgwọ laser. Usoro a na-enwe mmetụta dị nro na ọnya ọnya site na ọkụ ọkụ laser. Tupu oge eruo, a na-eji ngwọta iodine emepụta olu, nke na-enyere aka depụta ókè mmiri ahụ. N'okpuru ọrụ nke ọkụ, evaporation nke mmiri si na mkpụrụ ndụ ndị mebiri emebi, na-esi na nke ha na-ebibi. Igwe mmiri a na-eme ihe na-adịghị mma na nke dị irè. Mgbe ọgwụgwọ gasịrị, a dịghị emecha scars.
Mbibi na nbibi cervical
Na-edozi ajụjụ banyere usoro ọgwụgwọ, na-achọpụta otú e si gwọọ ájá nke ọrịa ahụ, ndị dọkịta na-ejikarị usoro nke mkpuchi obi eme ihe. Mgbe a na-eme ya, a na-emeso anụ ahụ emetụta ya na mmiri mmiri mmiri na-eji ngwa pụrụ iche. Akụkụ anụ ahụ na-acha ọcha. Mkpụrụ ndụ ahụ na-anwụ oge, na n'ọnọdụ ha ka e guzobere ndị ọhụrụ, ndị ahụike nwere ọnọdụ. Usoro ahụ na-adịru 15 nkeji. Enwere nnukwu mmiri mgbe ị na-eme ka ikuku mmiri ghara ịdị. Ha oge agaghị agafe ụbọchị 5-7. Ma ọ bụghị ya, a chọrọ ntuziaka.
Ihe ịrịba ama nke chlamydia na ụmụ nwanyị
Nne ime ule na ayodiin
Follicular ovarian siriri - ọgwụgwọ
Kedu otu esi echekwa PMS?
Ụmụ nwanyị na - akpaghasị - ihe kpatara ya
Obibi na-ewe iwe
Igbe ahụ wụsara
Ovarian rupture - akpata na nti
Surgytron na mmiri ikuku
Cystral cyst - ọgwụgwọ
Mmiri na-agbanye n'ọkụ mmanya na mkpụrụ osisi
Kedu esi ewepụ wrinkles n'okpuru anya?
Ụbọchị nkwụ n'ụlọ
Dee okirikiri warara - igwu gburugburu na ohere
Gold agbakwuru ọla
Utoojoo ude mmiri ude
Enwere ụlọ ọ bụla?
Kedu otu esi ahọrọ kichin?
Fuchsia: nlekọta oyi
Obodo ulo - ime n'ime
Ọhụrụ afọ na ụmụaka 4-5 afọ
Ọkụ-ọkụ ọkụ maka ebe obibi okpomọkụ
Kedu uwe ị ga-aga Ijipt?
Nnukwu nke propolis na mmiri nke na-arịa ọrịa shuga
Ebe obibi ndị mọnk nke Savin